नोभेम्बर - Best of Japan
जीवन र संस्कृति >
मौसमी मौसम >
यस पृष्ठमा, म नोभेम्बरमा होक्काइडोको मौसमको बारेमा परिचय दिनेछु। अक्टोबरमा सुन्दर शरद leavesतुका पातहरू देख्न सकिन्छ, तर पातहरू नोभेम्बरमा पातलो रूखहरूबाट खस्छन्। पूर्ण विकसित जाडो आउनेछ। तपाईंले होक्काइडोको लागि प्रस्थान गर्नु भन्दा पहिले कृपया पर्याप्त जाडोको कपडा तयार गर्नुहोस्। होक्काइडोमा मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल नोभेम्बरमा टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्। नोभेम्बरमा होक्काइडो बारे प्रश्न-उत्तर होक्काइदोमा नोभेम्बरमा हिउँ पर्दछ? होक्काइडोमा कहिलेकाहीँ नोभेम्बरदेखि हिउँ पर्न थाल्छ। यद्यपि हिउँ अहिलेसम्म जम्मा भएको छैन र पग्लनेछ। नोभेम्बरको अन्ततिर क्षेत्र मा निर्भर गर्दै हिउँ बिस्तारै जम्मा हुनेछ। नोभेम्बरमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ? होक्काइडोमा, जाडो नोभेम्बरमा शुरू हुन्छ। यो अझै दिउँसोमा १० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ, तर बिहान र साँझ जमिनमुनि रहनेछ। नोभेम्बरमा होक्काइडो डिसेम्बरमा टोकियो भन्दा चिसो छ। नोभेम्बरमा होक्काइडोमा हामीले कस्तो खालका लुगाहरू लगाउनु पर्छ? तपाईंलाई नोभेम्बरमा अदालत चाहिन्छ। प्यान्ट अन्तर्गत टाईट लगाउन अझ राम्रो हुन सक्छ विशेष गरी नोभेम्बरको अन्तमा। यो कहिलेकाहीं नोभेम्बरको अन्तमा हिउँसँग फिसलन हुन्छ। म एडीको सट्टा बुट लगाउने सल्लाह दिन्छु। जापान मा जाडो को कपडा को बारे मा निम्नलिखित लेखहरु मा सन्दर्भ गर्नुहोस्। होक्काइडो भ्रमण गर्नका लागि उत्तम समय कहिले हो? यदि तपाईं हिउँले ढाकेको परिदृश्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने, जनवरी-फेब्रुअरी उत्तम हो। मा मौसम ...
ओसाका नोभेम्बरमा मौसम! तापमान र वर्षा
ओसाकाको मौसम टोकियो र क्योटोमा लगभग समान छ। मौसम नोभेम्बरमा स्थिर छ, र त्यहाँ धेरै घमाइला दिनहरू छन्। तापक्रम सुन्दर छ, र यसलाई दर्शनीय स्थलहरूको लागि उत्तम मौसम भन्न सकिन्छ। ओसाकामा, शरद leavesतुको पातहरू नोभेम्बरदेखि मध्य डिसेम्बरको शुरुमा पुगेको हुन्छ। यस पृष्ठमा, म ओसका नोभेम्बरको मौसमको बारेमा विवरण दिनेछु। ओसाका मासिक मौसमको बारेमा तल लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल नोभेम्बरमा टोकियो र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोको साथसाथ ओसाका जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम ओसाका भन्दा केही फरक छ। ओसाकाको नोभेम्बरमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: नोभेम्बरमा ओसाकामा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत छ (१ 30 1981१-२०१०) नोभेम्बरमा ओसाकामा तापमान दिनको तातो घण्टामा पनि २० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम छ। यदि तपाईं अलिकता हिड्नुभयो भने पनि तपाई पसिना भन्दा थकित हुनुहुन्न। यो धेरै रमाइलो मौसम हो, त्यसैले कृपया विभिन्न स्थानहरू हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस्। जे होस्, बिहान र बेलुका तापमान १०-१-2010 डिग्रीमा खस्नेछ। यो एकदम चिसो छ, त्यसैले म तपाईंलाई मोटो ज्याकेट ल्याउन सिफारिस गर्दछु। तापक्रम यसै झर्दै जाँदा ओसाका रूखहरू बिस्तारै रातो पातमा परिणत हुन्छन्। मलाई लाग्छ कि तपाईं शरद पातहरू रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ ...
नोभेम्बरमा टोकियो मौसम! तापमान, वर्षा, लुगा
यस पृष्ठमा, म नोभेम्बरमा टोकियोमा मौसम प्रस्तुत गर्नेछु। नोभेम्बरमा मौसम आरामदायक छ। तापक्रम न तातो छ न चिसो। यो भन्न सकिन्छ कि यो टोकियो रमाइलो गर्न सबै भन्दा राम्रो मौसम हो। नोभेम्बर मध्य देखि, तपाईं मध्य टोकियो मा पनि, सुंदर शरद leavesतु पातहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तल टोकियोमा मासिक मौसमको बारेमा लेखहरू छन्। तपाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानु भएको महिना चयन गर्न स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस्। तल नोभेम्बरमा ओसाका र होक्काइडोको मौसमका बारे लेखहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडो साथ साथै टोकियो जाने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, कृपया नोट गर्नुहोस् कि होक्काइडोको मौसम टोकियो भन्दा बिलकुलै फरक छ। शरद clothesतुका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। नोभेम्बरमा टोकियोमा मौसम (अवलोकन) ग्राफ: नोभेम्बरमा टोकियोमा तापमान परिवर्तन ※ जापान मौसम एजेन्सीले जारी गरेको तथ्यांकको आधारमा। दुबै उच्च र न्यून तापमान डेटा विगत years० बर्षमा औसत हो (१ 30 1981१-२०१०) नोभेम्बरमा, टोकियोको मौसम शान्त छ। तापक्रम राम्रो छ। र आर्द्रता कम छ। त्यसोभए तपाईले धेरै आरामदायी यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। एउटा चीज जुन तपाईंले सावधान हुनु आवश्यक छ दृश्य स्थलहरूको भीड हो। किनकि यो त्यत्ति आरामदायी मौसम हो, साथै तपाईं पनि धेरै जापानी र विदेशी पर्यटक टोकियो आउँदछन्। नतिजा स्वरूप, लोकप्रिय होटलहरूमा चाँडै कुनै पनि खाली ठाउँहरू हुनेछन्। लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरूमा, तपाईंले प्रविष्ट गर्नको लागि लाइन अप गर्नुपर्नेछ। ज्ञानलाई विभिन्न तरिकाले संकुचित गर्नु राम्रो हुन्छ, र भीडको बखत कसरी रमाइलो भ्रमण गर्ने। कृपया ...
जापानमा नोभेम्बर! सबै भन्दा राम्रो र आरामदायक पर्यटन मौसम!
म नोभेम्बर जापान वरिपरि यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो सिजन छ कि लाग्छ। तपाईं टोकियो, क्योटो, ओसाका, हिरोशिमा जस्ता प्रमुख शहरहरूमा सुंदर शरद leavesतु पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं मन्दिर र मन्दिरहरूमा अचम्मको दृश्यको मजा लिन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी मध्य नोभेम्बर देखि ढिलोसम्म, मलाई लाग्छ कि यो केवल रूखहरूसहितको सडक र पार्कको साथ हिंड्नु रमाईलो छ। यद्यपि यो उत्तम मौसम हो किनकि सबैतिर पर्यटकहरू बसिरहेका छन्। यो कि मनमा आफ्नो यात्रा व्यवस्थित गर्न राम्रो हुनेछ। यस पृष्ठमा, म उपयोगी जानकारी प्रस्तुत गर्दछु जब तपाईं नोभेम्बरमा जापान भ्रमण गर्नुहुन्छ। टोकियो, ओसाका, नोभेम्बर मा होक्काइडो तपाईं नोभेम्बर मा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाँदै मा योजना भने को जानकारी, कृपया तलको स्लाइडर को छवि क्लिक गर्नुहोस् र थप जानकारी हेर्न जानुहोस्। नोभेम्बरमा जापानका प्रसिद्ध पर्यटक गन्तव्यहरू जताततै भीडले भरिएका छन् शहरको मध्य भागमा गोधूलि atमा व्यस्त सडकको सामान्य दृश्य। नोभेम्बर,, २०१ Ky क्योटो, जापान = शटरस्टक नोभेम्बरमा क्योटो र नारामा मन्दिर र मन्दिरहरू शरद leavesतु पातले घेरिएका छन् र चित्रकलाको संसार जत्तिकै सुन्दर बन्छन्। नोभेम्बरमा जापानको मौसम देशव्यापी रूपमा स्थिर छ र त्यहाँ धेरै घमाइलो दिनहरू छन्। हावा गर्मी जस्तो ओसिलो छैन, र तपाई आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। नोभेम्बर पर्यटन को बस सबै भन्दा राम्रो सिजन छ। दुबै घरेलु पर्यटक र विदेशी पर्यटक नोभेम्बरमा धेरै असंख्य छन्। त्यसैले, तपाईं जापान यस समयमा यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, म यसलाई यहाँ र होटल आरक्षण प्राप्त गर्न एक दुखाइ हुनेछ लाग्छ। त्यहाँ धेरै subways छन् ...